Kuratidza zvinyorwa neelebheri nature trail
Rieger's Trail muvashanyi, mutsvuku-mutsara nzira muKČT runyorwa nenhamba 0435, iyo yakavambwa uye zvine mutsigo yakavhurwa muna Gumiguru 20, 1909 neCzech Tourists Club uye inotungamira kubva kuSemily kuenda kuŽelezný Brod. Nzira inomhanya ichitevedza Jizera Rwizi uye urefu hwayo haasviki mashanu km. Iyi nzira inodanwa mushure meiye akakurumbira wezvematongerwo enyika uye Semil akaberekerwa František Ladislav Rieger, uyo, pakati pezvimwe zvinhu, akamira pakuvambwa kweNational Party uye akazova mutungamiri wayo wechipiri. "Riegrovka" inopfuura nepakati peJizera Valley zvisikwa zvisiri pedyo neSemily neBítouchov
Kubva pamavambo chaipo, nzira iyi yakasangana nemhinduro huru, muna 1925, tsime raAntala Stašek nemvura yakanaka yechitubu yakapera munzira. Nekudaro, iyo yekutanga njanji haina kuchengetwa nenzira iyo iwe yaunogona kufamba nayo nhasi. Pakati pa1922 na1926, iyo Spálov hydroelectric power plant yakavakwa pane ino saiti uye nanhasi ichiri kushanda nanhasi. Uye zvakare, iri technical rarity. Musha wevashanyi weCrh wakavakwa pedyo nawo muna 1929 - nhasi uno unonzi Hotel Pod Spálovem. Hydroelectric…